A ga-amachibido caffeine na ọgwụ cocaine? - 1aviagem.com
A ga-amachibido caffeine na ọgwụ cocaine?
Previous post: Por quê franceses torcem o nariz quando você fala em inglês e o que isso tem haver com os brasileiros?
Next post: Como se deslocar em Paris?
Edebere 19 May 2019 site Römulo Lucena
Na post gara aga, anyị na otu onye njem Peru na Brazil na-agba ajụjụ ọnụ banyere Peru. (Ị nwere ike ịnweta ọnụahịa a dị ukwuu site n'ịpị ebe a).
N'ihi ya, ekpebiri m ịchọta ihe ịmata banyere coca tea Peruv.
Ihe omimi mbu bu na enwere coca tea dika uzo choro na Brazil, ya bu, omenala.
N'ihi oke elu n'ihi ugwu Andes na ugwu ndị ọzọ; ọ dịkarịa ala ọkara ala Peruvian (nke dị elu karịa 2.500 mita elu) a na-ewere coca akwukwo tii ka ọ na-egbochi malaise dịka: ọgbụgbọ, ike iku ume na isi ọwụwa.
Ihe mgbaàmà ndị a niile nwere ike ịbụ mmetụta kpatara elu. (Akpotara ya site n'omume nke ugwu.) N'ihi ya, mkpa nke akwukwo coca na ihe ogwugwu ya.
Tupu onye ọ bụla enwee obi ụtọ banyere ịga ebe ahụ ma chee na ha ga - enwe "ọnụ ala" ma ọ bụ "ikuku," ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na - emepụta tii, azịza ya bụ ... ee, ị gaghị ebuli elu.
Onye na - enye nsogbu ndị a bụ cocaine, na-edozi ma jiri ọgwụ na oke dị elu. Tii, agaghị eme ka mmetụta a pụta, kama ọ ga-enyere aka iku ume ma belata mgbaàmà dị elu. (Nsogbu nke ugwu).
Akwụkwọ coca nwere banyere ogige chemical 14, ihe ana-akpọ ọtụtụ alkaloids. Na mkpara na-eme ka cocaine pụta ìhè. Ndị ọzọ nwere calcium, ígwè na phosphorus na vitamin A (ee, akwukwo coca yiri otu dan danho na ọ bụ lactose n'efu).
Na mgbakwunye na akwukwo coca na-eme ka mgbochi ọnyá na gastritis, na-emekwa ka ọrụ imeju na imeju dị mma. Ọ dịkwa mkpa icheta na ọ gaghị agwọ gị na ihe a nile, ọ na-enyere gị aka imeziwanye. Dịka onye ọ bụla nke na-eri carrots na beta-carotene adịghị agwọ nke myopia ma ọ bụ astigmatism, ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-ata ikikere ezé adịghị agwọ ya, ma enwere mgbapụta na omume ndị a; onye ọ bụla na-aṅụ tii coca agaghị agwọta ọnya, gastritis ma ọ bụ ọbụna mmetụta hallucinogenic.
O doro anya na ndị mmadụ na-eri coca tii, n'ihi ngalaba cocaine, ma eleghị anya ọgwụ nke otu aha ahụ si n'ebe ahụ bịa. Ị ghaghị ịkpachara anya ịghara ịdabere na ya.
Na kọfị ya jupụtara na alkaloids, ndị ọzọ dị iche na tii tii, doro anya na ha nwekwara calcium, ígwè na phosphorus na vitamin C.
Na-ejekwa ozi dị ka ihe na-akpali akpali, isi ọwụwa ọgụ, diuretic, ọgba aghara ọgụ.
Mana anyi na ekwu okwu banyere caffeine. Ọbụna ha mepụtara coffee kọfị, ma ha emeghị kọfị n'enweghị calcium, n'enweghị ígwè ma ọ bụ na-enweghị vitamin C.
Caffeine bụkarị kọfị kọfị, mana ọ bụkwa ya bụ onye na-azụ ahịa ya.
Ọ pụkwara ịba ahụ, e nwere ndị na-ejikwa jikwaa iko kọfị 2 ma ọ bụ 3. Ma ka nọgidere na-ewere ya n'ụbọchị. N'ihi na ụfọdụ àgwà emeela ka ehighị ụra nke ọma, ebe ọ bụ na kọfị na-erepịa ụbọchị dum ma na-etinye caffeine n'ahụ. Ma enwere ndị nwere kọfị n'ehihie ma ọ bụ n'abalị ma ghara iche na ụra na-ehi ụra.
Ikwu okwu gbasara omenala ndi South America
Ya mere, ọ bụrụ na ịga Peru, Bolivia, Chile ma ọ bụ obodo ndị ọzọ nwere elu karịa 3.000 mita na-ewe obere coca tii, mana akwụkwọ a ga-enyere gị aka!
Ma ọ bụrụ na ị bịa Brasil, Colombia, ma ọ bụ Argentina, were kọfị anyị, nke dị ka tea coca, bụkwa omenala Brazil, ọ bụghị naanị Brazil, kama South America, na ọtụtụ mba ndị ọzọ, tinyere ndị Europe.
Ma gi onwe gi agagh adi ka "ikuku,
Na-eme n'ụzọ omenala na n'ụzọ dị mma, ọ ga-abụ na ị ga-enwekwu njikere.
Ma caffeine na cocaine na-akpali akpali. Ihe kesara ha dị ka ọgwụ ọjọọ bụ ikwubiga okwu ókè. Ya mere, anyị nwere ndị cocaine na ndị ọzọ na caffeine. Ma ọ bụ na kọba coca, ma ọ bụ kọfị.
Mana ọ dị mfe icheta na ihe ọ bụla ọzọ bụ nsi. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ kọfị dị ukwuu ị ga-enwe nkụchi obi, ọ bụrụ na ị na-aṅụ oké coca tii, ị ga-enwe mgbu afọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-egwu egwuregwu na ị na-asọ mpi, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike. N'ihi na ule mgbochi doping ga-ebubo caffeine na cocaine dị ka amachibidoro ihe.
Ma ọ bụrụ na ị na-ezumike na mba ndị a ma ọ bụ na-arịgo ugwu, ma ọ bụ chebe onwe gị pụọ na oyi, gbalịa na-atọ ụtọ nke omenala obodo, obere cafe na-eme ka ị maa jijiji ma kpọtee gị. Aịcha coca na-enyekwara gị aka ịdị mma. Na na omenala Andean.
Nke ahụ bụ ya, nke a bụ ihe dị mfe nghọta na ntakịrị ihe ọdịbendị nke ụwa anyị (South America).
N'ezie, dị ka onye ikpeazụ na-azụ ụgbọ mmiri na-aga South America na chọrọ atọ ụtọ kọfị Colombia na tii Peruvia m na-ahapụ njikọ Bookaway nke dị mfe ma dị mfe ịtọọ oge njem. Rịba ama, ị nwere ike ịgbanwe asụsụ site na ịpị ọkọlọtọ.
Na-ejide gị ma hụ gị oge ọzọ.
akụkọ ihe mere eme Cafe coca tii Cocaine omenala ọgwụ ọjọọ ikwubiga okwu ókè
Wasnye bụ onye ahụ nke kwuru na ị nweghị ike #travel? Onye guru #travel na ntinye iguta #1aviagem.com nwere ike ịbụ onye ọzọ ma ọ bụghị "Gburugburu ụwa na Daysbọchị 80 nke Jules Verne. E nwere # omume enwere #adagon enwere # nke a na-atụghị anya ya, ọ fọkwara nke ikpeazụ ka #quarentena usoro ọgụgụ ndị ọzọ dị na 1aviagem.com #fiqueemcasa #leia #travel #stayAtHome #read #travelthroughtheworld
Naanị lee m anya na #eyes nke m na-achọ ịwakpo! #cat #playing ha #loveit
#graffiti na # Brasília #1aviagem 1aviagem.com